နွေရာသီ အပူရှိန်ကြောင့် ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တောမှ ရွှေသမင်များရေလူးသည့် ကန်နှင့် သောက်သုံးရေ - Yangon Media Group
နွေရာသီ အပူရှိန်ကြောင့် ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တောမှ ရွှေသမင်များရေလူးသည့် ကန်နှင့် သောက်သုံးရေ
မင်းဘူး၊ မေ ၁၂
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးမင်းဘူး စကုမြို့နယ်ရွှေ စက်တော် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေး မဲ့တောအတွင်းရှိ မြန်မာ့ရွှေသမင် များ ရေလူးရန်နှင့် သောက်သုံးရေ ကန်များခန်းခြောက်နေသဖြင့် ကန် များအတွင်းသို့ ရေများလိုက်လံ ဖြည့်တင်းပေးနေရကြောင်း ရွှေ စက်တော် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေး မဲ့တောမှ သိရသည်။
ရွှေစက်တော် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောသည် မင်းဘူး ခရိုင် မင်းဘူး၊ ပွင့်ဖြူ၊ ငဖဲနှင့် စေတုတ္တ ရာမြို့နယ်အတွင်းတည်ရှိပြီး လက် ရှိ ၁၁၄၆၇၈ ဒသမ ၇၁ ဧက ကျယ်ဝန်းကာ ဘေးမဲ့တောအတွင်း ကျင်လည်ကျက်စားနေသည့် ရွှေသမင်များ ရေလူးခြင်းနှင့်သောက် ရေအဖြစ် အသုံးပြုနေသည့်ရေကန် များမှာ နွေရာသီအပူချိန်ကြောင့် ရေခန်းခြောက်လာသည့်အတွက်အဆိုပါကန်များအတွင်းသို့ ရေ သယ် ဘောက်ဆာယာဉ်များဖြင့် ရေများ ဖြည့်တင်းပေးနေရသည်။
”ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တောအတွင်း မှာ မိုးရာသီဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေ သောက်သုံးရေကန် ဆယ်ကန်ရှိ တယ်။ အဲ့ဒီ ဆယ်ကန်ထဲကမှရေ ကားတွေမောင်းလို့ရတဲ့ကန်တော် ကြီးကန်အပါအဝင် ကန်လေးကန်ကိုပဲ ရေဖြည့်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ကန်တွေထဲ ရေဖြည့်ပေးနိုင် ရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ရွှေ စက်တော်ဘေးမဲ့တော၊ သစ်တောဦး စီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး ဦးအုန်းလွင်က ပြောကြား ခဲ့သည်။
အဆိုပါမင်းဘူး စကုမြို့နယ် ရွှေစက်တော် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောအတွင်း မြန်မာ့ရွှေ သမင်များအတွက် ရေလူးရန်နှင့် သောက်သုံးကန်များ ရေဖြည့်ပေး နိုင်ရန်အတွက် အနယ်နယ်အရပ် ရပ်မှ စေတနာရှင်အလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းငွေဖြင့် ရေသယ်ဘောက် ဆာယာဉ်တစ်စီးလျှင် ကျပ် ၁ဝဝဝဝ နှုန်းဖြင့်ငွေကျပ် ၁၃သိန်းရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဘေးမဲ့တောသည် ရွှေသမင်ကာကွယ်တောအတွင်း ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ၉၅၂ကောင်ရှိ ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သစ် တောဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဒေသခံများ စီမံခန့်ခွဲမည့် Dolphin Community Lodge ကို ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေး အင်ဒေါင်းရွာ၌ မေ ၁၅ ရက်တွင်ဖွင့်မ??
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် သုံးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ဥပဒေကိုးခုကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ကြော?
ကြည့်မြင်တိုင် ၌ ဆောက်လက်စ ကန်ထရိုက်တိုက် ရေလှောင်ကန်အတွင်း အလုပ်သမားသုံးဦး အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သေဆုံး
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် အမေရိကန်ရေတပ်လေယာဉ် ပျက်ကျပြီးနောက် လူ ၈ ဦးကို ကယ်ဆယ်လိုက်ရ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ UEHRD နှင့် NRPC ရုံးသို့ရေ?
တရုတ်နိုင်ငံမှ လွှဲပြောင်းလာသော မြန်မာနိုင်ငံသား ၃၂ဝ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ
တောင်ကိုရီးယားတွင် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖို နှစ်လုံး ပြန်လည် လည်ပတ်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိ